Apple Famantarana ny Lehiben'ny fifandraisana Spotify teo aloha; raikitra ny ady | Vaovao IPhone
Apple Famantarana ny Lehiben'ny fifandraisana Spotify teo aloha; raikitra ny ady
Pablo Aparicio | | Apple Music
Rehefa avy nanolotra ny Apple Music, Spotify Nilaza izy fa tsy niahiahy momba ny fahatongavan'i Apple teo amin'ny sahaniny, heveriko fa nanambany ny mety ho fisehon'ilay orinasa monina Cupertino izy. Vetivety dia hitan'izy ireo fa ny Apple Music dia ho serivisy malaza be izay hanampy mpanjifa an-tapitrisany ao anatin'ny volana vitsivitsy, fa ny zavatra tsy nomeny lanja dia ny lafiny hafa, toa ny Tim Cook sy ny mpiasa manangona mpiasa avy amin'ny mozika soedoà serivisy mivantana.
Izany no nitranga tamin'ny fizarana farany an'ny Spotify vs. Apple Music: ny an'ny Cupertino dia nahazo ny serivisin'i Steve Savoca, ny lohan'ny fifandraisana taloha izay mbola mijanona ho mpanjaka amin'ireo serivisy mozika mivantana. Nandao ny orinasa soedoà tamin'ny volana aogositra lasa teo i Savoca, angamba satria efa naharesy lahatra azy i Apple, ary hitana andraikitra mitovy amin'izany amin'ny serivisy mozika an'ny Cupertino.
Steve Savoca, ex Spotify, dia efa miasa ao amin'ny Apple Music
Amin'ity herinandro ity, Apple noraisina ho mpikambana manakarama ny mpanatanteraka teo aloha Spotify, milaza izany hifantoka amin'ny fifandraisana amin'ireo marika firaketana kely sy tsy miankina, indrindra ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy tokony hadinontsika fa ny Apple Music dia efa manana an'i Jimmy Iovine, mpanatanteraka ao amin'ny Beats, mandra-pahatongan'ny Cupertino olona nividy ny orinasan'izy ireo, raha tsaroako tsara, tokony ho $ 3.000M. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, mandeha ny teoria fa Iovine dia hanohy hifampiraharaha amin'ny ankamaroan'ny marika lehibe ho an'ny Apple Music, raha i Savoca kosa hifampiraharaha amin'ny ambaratonga izay mety tsy ho azon'i Iovine antoka.
Savoca dia iray amin'ireo mpiasa Spotify voalohany, izay nandaniany 5 taona. Alohan'izany, ny fanaovan-tsonia vaovao an'i Apple dia tao amin'ny Domino Records ary orinasan-tsoratra hafa, koa hanana fifandraisana manan-danja eo amin'ny tontolon'ny mozika ianao. Etsy ankilany, Savoca koa dia ao amin'ny Music Business Association, izay mampiseho ny maha-zava-dehibe ny fanakaramana farany an'i Tim Cook. Ankehitriny dia mbola tokony ho jerena izay nandika izany rehetra izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Music » Apple Famantarana ny Lehiben'ny fifandraisana Spotify teo aloha; raikitra ny ady
Na eo aza ny zava-drehetra, ny iPad ihany no takelaka be mpividy indrindra eny an-tsena
Ny headphones BeatsX vaovao dia hanomboka afaka andro vitsivitsy